'Phansi amaphaphu, isizini isephansi'
LUNGILE MAJOKA | August 13, 2019
PHEZU kokusayinisa abadlali asebemnkantshubomvu kwi-Absa Premiership, iBlack Leopards ibalwa namaqembu ayiqale ngebatha imidlalo yale sizini njengoba isishaywe kwemibili eyidlalile.
Iqale yahlulwa yiPolokwane City ngo 1-0 kowabakhaya, yaphinde yawalahla amaphuzu isihlulwa yiKaizer Chiefs ngo 1-0 ngempelasonto eMoses Mabhida Stadium, eThekwini.
Leli qembu eliphekwa uLionel Soccoia obengekho ebhentshini koweChiefs ngenxa yekhadi elibomvu, lisayinise uThabo Matlaba, Cuthbert Malajila obeqala ukudlala kowaMakhosi, noThuso Phala oqale ebhentshini.
Yize kubukeka kusenzima ukuthi iqembu lihlangane lithole imiphumela eliyidingayo, iphini likaSoccoia, uPatrick Mabedi lithe isizini isephansi kakhulu ukuthi sebengaqala ukutatazela.
“Yebo sesihlulwe imidlalo emibili okuyinto engeyinhle okumele sizithintithe siyilungise. Kusesekuseni sisengakwazi ukubafica abanye. Kwesinye isikhathi into emqoka empilweni nasebholeni wukuqonda ukuthi kwesinye isikhathi uyaqala kahle uqede kahle futhi ungaqala kabi kodwa kube nesiphetho esihle. Akubalulekile ukuthi uqala kanjani okumqoka wukuthi uqeda kanjani. Sizobuya,” kusho uMabedi.
Uma kukhulunywa ngendlela yokuqeda, ngesizini edlule iLeopards izithole ibalwa namaqembu abalekela izembe kwaze kwaba yimidlalo yokugcina yeligi ngakho lokhu ukulahla amaphuzu.
Iqale isizini kuhleli uJoel Masutha ogcine ededeliwe ingavuki imiphumela emihle kwaqashwa uDylan Kerr ezozama ukufukula umkhumbi obuzika.
Emdlalweni olandelayo ngo-Agasti 24, iLeopards izovakashelwa yiHighands Park eThohoyandou Stadium ngo-3 ntambama.
Mayelana nomdlalo weChiefs, uMabedi owayengukaputeni weChiefs uthe: “Besiyihlelele iChiefs futhi nendlela esiqale ngayo ibinokuzethemba. Sizamile ukumelana nabo esiswini kodwa sagcina sibavulela isikhala esikhulu sokudlala. Uma silahla ibhola besingakwazi ukulibuyisa ngokushesha ngenxa yejubane labo. Negoli esilidedelile belilula. Kwesinye isikhathi uyabanikeza abadlali umsebenzi kodwa bangawenzi.”